T-SHIRT WITH SIDE BANDS forcategory_name
 ဘးဘက်တွင် ကြိုးဖြင့် အလျားလိုက်အပေါက်ပါရှိတယ်။
 ဘေးဘက်တွင် ကြိုးဖြင့် အလျားလိုက်အပေါက်ပါရှိတယ်။
 95% polyester, 5% elastane
 Hand Wash .5% alastane
 မီးအပူချိန် 110 ° C / 230F အထိ သာတိုက်ရန်။
 အခြာက်လျာ်ခြင်းဖြင့် လျော်ဖွတ်နိုင်။
ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု-ရောင်စုံသားရေပုံးအိတ်။ အိတ်အတွင်းပိုင်းတွင် အိတ်ကပ်အကြီး ၂ခုပါရှိပါတယ်။ သံလိုက်စွဲစေ။ လက်ကိုင်ကြိုးနှင့် ပုခုံးတွင်ကြိုးသိုင်းလွယ်ရန် ကြိုးရှည် တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။ အမြင့်က x အကျယ် x အနက် :. 28 x 28 x 22 စင်တီမီတာ / x 11.0 x 11.0 ×8.6″
 ခြားနားသော အရာင် အဆင်းနှင့် အတူ ရေပုံး အိတ်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။  အဖြူရောင် အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။  လက်ကိုင်နှင့် ပုခုံးသိုင်းကြိုးပါရှိပြီး ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ ကြိုးပါရှိပါတယ်။  အထဲတွင်အိတ်ပါရှိပါတယ်။  အမြင့် x အကျယ် x အနက်: 30 x 30 x 14 စင်တီမီတာ. / 11.8 x 11.8 x 5.5″
 အနက်ရောင် မြို့တော် ဆိုတဲ့ အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။  အကန့် သုံးကန့် နှင့်အတူတန်းစီထားပါတယ်။  ပုခုံးကြိုးသိုင်းကြိုးပါရှိပြီး ဖြုတ်လို့ တပ်လို့ ရတဲ့ ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။  အမြင့် x အကျယ် x အနက် : 22 x 30 x 15 စင်တီမီတာ. / 8.6 x 11.8 x 5.9″
 မီးခိုးရောင် အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။  အတွင်းပိုင်းတွင် အခန်းနှင့်ဇစ် တပါတည်းပါရှိပါတယ်။  ပုံစံ ၂မျိုးအသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။  အမြင့်×အကျယ်×အနက် : 28 x 35 x 16 စင်တီမီတာ. / 11.0 x 13.7 x 6.2″
 စတော်ဘယ်ရီ -ရောင်စုံမြို့အိတ်။ ပုခုံးသိုင်းကြိုးပါရှိပါတယ်။  အတွင်းတွင် ဇစ်လိုင်းနှင့် အိပ်ကန့်၂ခု ပါရှိပါတယ်။  ရွှေရောင် ကြိုးနှင့် အတူ သံလိုက် ပါတယ်။  အမြင့် x အကျယ် x အမြင့်: 24 x 30 x 16 စင်တီမီတာ. / 9.4 x 11.8 x 6.2″ Instock ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းများကတော့ (၂) ပတ် လောက်ထပ် စောင့်ပေးရပါမယ်။